प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध विवेकशिलको प्रर्दशन Global TV Nepal
आज असोज ३, संविधान दिवस मनाइँदै एएफसी महिला एसियन कप–२०२२ : नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा सुनिता बराल चयन खर्बाैँ रुपैयाँ तलमाथि पर्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप राष्ट्रपति भण्डारीबाट ८ जनालाई माफी, ५२३ जनाको कैद कट्टा काठमाडौँको फोहोर फाल्न बञ्चरेडाँडाका स्थानियबाट अबरोध १,०६६ जनामा कोरोना संक्रमण, १६ को मृत्यु प्रितिबाट युनिकोड | युनिकोडबाट प्रिति
प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध विवेकशिलको प्रर्दशन
ग्लोवल टि.भी. सोमवार, माघ १९, २०७७ 0
प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध विवेकशिल पार्टीले सोमबार काठमाडौंमा प्रर्दशन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बिघटन असंबैधानिक भएको भन्दै विवेकशिल पार्टीले काठमाडौंको माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । म नागरिक, हरेक गलतविरुद्ध आवाज उठाउछु लेखिएको प्लेकार्डसहित प्रदर्शनमा सहभागी भएकाहरुले संसद बिघटनको निर्णय सच्चाउनुपर्ने जनाएक थिए ।
उनीहरुले नागरिकविरुद्धको गतिविधी नसच्चिएसम्म विरोध प्रदर्शनलाई जारी राख्ने बताएका छन् । गैरसंबैधानिक तरिकाले संसद बिघटन गरेर अधिनायकबादी चरित्र देखाएको भन्दै पार्टीले दोश्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रर्दशन गरेको हो ।
नयाँ सत्ता समिकरणः ओलीलाई कांग्रेस र जसपाको न्यानो काख
कांग्रेस महाधिवेशन आजबाट, पहिलो चरणमा ५६ जिल्लामा महाधिवेशन हुँदै
सुनचाँदीको भाउ बढ्यो, कतिमा भयो त कारोबार ?
अमेरिकामा भवन भत्किँदा १ को मृत्यु, ९९ जना सम्पर्क विहिन
अमेरिकी राष्ट्रपतिले लगाए कोरोना खोपको पहिलो डोज
प्रधानमन्त्री भन्छन् सबै ठिकठाक–तर, तथ्याङकले यस्तो देखाउँदैन